Madaxweynaha dowladda Puntland oo safar shaqo ugu ambabaxay dalalka Itoobiya iyo Shiinaha - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowladda Puntland oo safar shaqo ugu ambabaxay dalalka Itoobiya iyo Shiinaha
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Jimce ah safar shaqo ugu baxay dalalka Itoobiya iyo Shiinaha.
Safarka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii uu caasumaad ka helay dalalkaas.
Madaxweyne Cabdiweli oo saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha kumeel gaarka ah ee Kanooko ee kuyaala caasimada Puntland ee Garoowe ayaa ka hadlay safarkiisa uu ku tagi doono dalalka Itoobiya iyo Shiinaha.
”Waxaan saaka u ambabaxayaa dalka Itoobiya iyo socdaal gaaban oo aan ku gaari doono dalka Shiinaha, dalka Itoobiya waxaan u aadi doonaa arrimo la xidhiidha iskaashiga amaanka iyo arimihii noosocdey ee haa iskaashiga dhanka ganacsiga, socdaal gaaban oo dhowr beri qaadan doonana waxaan ku tegidoona wadanka Shiinaha oo aan u aadi doono hawlo laxidhiidha horumarinta Mashariicda” ayyuu yiri madaxweynaha dowladda Puntland.
“Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu soo guuleeyo safar kayaga wax fiicana uga soo baxaan dadka iyo dalka Puntland, sidoo kale waxan ku dardaarmayaa labadii arimood ee ahaa ladagaalanka argagixisada dalka ku soo duushey iyo sidoo kale gurmadka loo fidinaayo dadka abaaruhu wax yeleeyeen” ayuu ku daray Cabdiweli Maxamed Cali.
Ugu dambayna, safarkan madaxweynaha uu ugu ambabaxay dalalka Itoobiya iyo Shiinaha ayaa waxaa ku weheliyay masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dowladda Puntland.
January 14, 2017 Dowladda Puntland oo sheegtay in 4,000 booyadood oo biyo ah la gaarsiin doono dadka ay abaartu saameysay
The U.S. military conducted two strikes in southern Somalia early this week that killed four al-Qaida-linked al-Shabab militants involved in attacks on Somali government troops, a U.S. military spokeswoman said on Wednesday. The U.S. military [...]